I-DOPPELGERZ ® VITAMIN ASSET YABADALI BESI-DIABETIC > Ukwelashwa nokuvimbela
Ungawathatha kanjani amavithamini e-Doppelherz kashukela
Inkimbinkimbi ekhiqizwe ngokukhethekile yamavithamini namaminerali ezigulini ezinesifo sikashukela.
Amavithamini abandakanyeka kuzo zonke izinqubo ze-metabolic, okwandisa ukumelana komzimba ezintweni ezimbi zangaphandle, ama-microorganisms namagciwane. ukungasebenzisi okwanele kwamavithamini kanye namaminerali emzimbeni wesiguli esinesifo sikashukela kungenye yezici ezisengozini yezinkinga ezibucayi, ngokuyinhloko njengokuthi retinopathy (ukulimala kwemithambo ye-retinal) ne-polyneuropathy (ukulimala kwemithambo yezinso). Enye inkinga evamile yesifo sikashukela ukulimala kohlelo lwezinzwa oluyingozi (i-neuropathy).
Amavithamini amaningi awanqwabelani emzimbeni, ngakho-ke iziguli ezinesifo sikashukela zidinga ukunakwa okujwayelekile kwamalungiselelo aqukethe amavithamini kanye nama-macrolements ahlukahlukene. Ukudla inani elanele lamavithamini kuqinisa umzimba, lithuthukisa isimo salo sokuzivikela komzimba, futhi kuvimbele nokuvela kwezinkinga. I-Vitamin kanye ne-mineral complex, eyenzelwe ngokukhethekile iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus, iqukethe amavithamini abalulekile ayi-10, kanye ne-zinc, chromium, selenium ne-magnesium.
Ukuthatha le nkimbinkimbi, eyakha isidingo esengeziwe sokuthola amavithamini, ama-microelements kanye namaminerali ezigulini ezinesifo sikashukela, kufanele kukhunjulwe ukuthi lokhu akubeki esikhundleni sohlelo oluphambili lokwelapha isifo sikashukela, kodwa kusifaka kuphela. Ngaphezu kwengxube yamavithamini, udokotela kufanele ancome imithetho eyisisekelo yokudla okunempilo ngokuhambisana nendlela yokuphila eyanele, ukuvivinya umzimba okwanele, ukulawula isisindo, kanye nemithi kuzo zonke iziguli ezinesifo sikashukela.
Ukuvikela ukukhula kwezinkinga,
Ukulungisa ukuphazamiseka kwe-metabolic ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus,
Ukwenza ukuntuleka kwamavithamini namaminerali, noma kunokudla okuqinile,
Ukubuyisela umzimba futhi uthuthukise isimo ngemuva kwezifo,
Ukwenza ngcono inhlalonhle ephelele.
Ukudla okusebenzayo kokusebenzisekayo. Hhayi isidakamizwa.
Isitifiketi Sokubhaliswa Kwezwe Nombolo RU.99.11.003.E.015390.04.11 ka-04.22.2011
Yonke imikhiqizo yenkampani i-Kvayser Pharma GmbH ne-CoKG yenziwa ngesisekelo sentuthuko yakamuva yezobuchwepheshe futhi ihlangabezana namazinga aphezulu kakhulu wekhwalithi ye-GMP.
ukusebenza nsuku zonke (= 1 ithebhulethi)
% komthamo wansuku zonke onconywayo
Vitamin B12 9 mcg 300
I-Biotin 150 mcg 300
I-Folic acid 450 mcg 225
ICalcium pantothenate 6 mg 120
I-Nikotinamide 18 mg 90
Vitamin B2 1.6 mg 90
I-Chrome 60 mcg 120
ISelenium 39 mcg 55
I-Zinc 5 mg 42
Abantu abadala baphuza ithebhulethi elilodwa kanye ngosuku nokudla.
Imikhombandlela yeziguli ezinesifo sikashukela mellitus: Ithebhulethi eli-1 liqukethe amayunithi esinkwa angama-0,01.
Amavithamini kanye namaminerali sikashukela.
Ukwenziwa kwamathebhulethi kanye nendlela yokukhululwa
Isifo sikashukela kufanele sinakekele ukutholwa kwamanani amavithamini anele. Lokhu kukuvumela ukuthi uyeke ukuqhubeka kwesifo. Kepha ngasikhathi sinye, iziguli kufanele zikhumbule isidingo sokondleka okufanele nokuzivocavoca umzimba. Uma kunesidingo, udokotela akakuvezi amavithamini kuphela, kepha nemithi evumela ukuthi ulawule ushukela wegazi.
I-Doppelherz for Diabetesics iyatholakala ngesimo sethebulethi. Kwiphakethe elilodwa kunama-pcs angama-30 noma angama-60. Zithengiswa emakhemisi amaningi, ezitolo ezikhethekile.
Kusukela kwimiyalo esetshenzisiwe, ungathola ukuthi ukwakheka kwamavithamini e-Doppelherz kuqukethe:
200 mg we-ascorbic acid,
I-200 mg ye-magnesium oxide
I-42 mg i-Vitamin E
I-18 mg ye-Vitamin PP (i-nicotinamide),
I-6 mg pantothenate (B5) ngesimo se-sodium pantothenate,
5 mg zinc zincconate,
I-3 mg pyridoxine (B6),
2 mg thiamine (B1),
0.45 mg we-folic acid B9,
0.15 mg biotin (B7),
0.06 mg we-chromium chloride,
0.03 mg selenium,
I-0.009 mg ye-cyanocobalamin (B12).
Ukudalwa okunjalo kwamavithamini nezinto ezikuvumela ukuthi wenze ukuncipha kwabo emzimbeni we-diabetes. Kepha ukwamukela kwabo ngeke kusize ukuqeda lesi sifo esiyimbangela. I- "Doppelherz yabanesifo sikashukela" yandisa izivikeli mzimba futhi ivimbele ukuqhubekela phambili kwezinkinga ezinkulu ezivelayo ngenxa yokuqina kweglucose.
Lapho uthatha, abanesifo sikashukela kufanele bakhumbule ukuthi ithebhulethi ngayinye iqukethe i-0,1 XE.
I-Endocrinologists incoma ukusetshenziswa kwe-Doppelherz yezifo zesifo sikashukela ezigulini eziningi ukugcina ukungavikeleki esimweni esijwayelekile. Kubekelwe:
ukuvimbela izinkinga zesifo sikashukela,
ukugcwalisa ukusweleka kwamaminerali namavithamini,
ukuvuselela amandla omzimba, ukuvuselelwa komzimba ngemuva kwezifo.
Lapho uthatha amavithamini, uDopel Hertz angenza isidingo esikhulu samavithamini nezinto ezahlukahlukene. Kepha angeke zingene esikhundleni sokwelashwa ngezidakamizwa sikashukela. Ngasikhathi sinye, abanesifo sikashukela kufanele banake isidingo sokulandela ukudla nokuzivocavoca umzimba okwenzekayo.
Ngaphambi kokuthenga amavithamini, udinga ukuqonda ukuthi asithinta kanjani isimo sezempilo sabanesifo sikashukela. Lapho uzithatha, okulandelayo kuyabonakala:
izinqubo ezenziwe ngcono kakhulu ze-metabolic,
Impendulo yokuzivikela komzimba lapho ama-pathogenic microorganisms angena emzimbeni iba mkhulu,
ukumelana nezinto ezingezinhle kuyakhuphuka.
Kepha lolu akulona uhlu oluphelele lokuthi lama vithamini awuthinta kanjani umzimba. Vimbela ukukhula kwezinkinga ezivame ukwenzeka ngemuva kwesizinda sokushoda kwamavithamini nezinto ezibalulekile. Lokhu kufaka phakathi ukulimala emithanjeni yezinso (polyneuropathy) ne-retina (retinopathy).
Lapho amavithamini eqembu B engena emzimbeni, amandla agcinwa emzimbeni, futhi ibhalansi ye-Homocysteine ​​iyabuyiselwa. Lokhu kukuvumela ukuthi ugcine ukusebenza okujwayelekile kohlelo lwethambo nenhliziyo.
I-Ascorbic acid ne-Vitamin E (tocopherol) zinesibopho sokuqedwa kwama-free radicals. Futhi akhiwa ngamanani amakhulu emzimbeni wesifo sikashukela. Lapho umzimba ugcwala lezi zinto, ukubhujiswa kweseli kuyavinjelwa.
I-Zinc ibhekene nokwakhiwa kokungazweli nama-enzyme adingekayo we-metabolic acid metabolism. Into ebekiwe ithinta kahle ukwakheka kwegazi. I-Zinc nayo ihilelekile ekuhlanganiseni kwe-insulin.
Umzimba udinga i-chromium, oqukethwe kwimpahla yamavithamini Doppelherz ezigulini ezinesifo sikashukela. Nguye oqinisekisa ukugcinwa kwamazinga weglucose ejwayelekile egazini, ngenkathi egcobisa umzimba ngalesi sici ukufiswa kwamaswidi kuyancishiswa. Kuvimbela ukuthuthukiswa kwezifo zemisipha yenhliziyo, kuvimbela ukwakheka kwamafutha futhi kugqugquzela ukukhishwa kwe-cholesterol egazini. Ukudla okwanele kuyo kuyindlela enhle kakhulu yokuvimbela isifo sokuqina kwezinzwa.
I-Magnesium ibamba iqhaza ezinqubweni ze-metabolic. Ngenxa yokugcwala komzimba ngalesi sakhi, kungenzeka ukuthi kube ngokwejwayelekile ukucindezela kwegazi futhi kuvuse ukukhiqizwa kwama-enzyme.
Iziphuzo ezibizwa ngokuthi "Doppelherz Asset for diabetesics" kufanele zichazwe ngudokotela. Njengomthetho, kunconyelwa ukuzisebenzisa ku-1 pc. kanye ngosuku. Uma isiguli sinenkinga yokugwinya yonke ithebhulethi, ukuhlukaniswa kwayo kube izingxenye eziningi kuvunyelwe. Baphuze ngenani elilinganayo loketshezi.
I-Doppelherz Activ multivitamin eyinkimbinkimbi yeziguli ezinesifo sikashukela izosiza ukuxazulula izinkinga ezilandelayo:
Susa ukuphazamiseka kwe-metabolic.
Ukubhekana nokushoda kweVitamin.
Vimbela ukuvela kwezinkinga zesifo sikashukela.
Kubalulekile: Ngaphambi kokuthatha izithasiselo zokudla, kufanele uthintane nodokotela wakho.
Umuthi ubekelwe abantu banoma yibuphi ubulili obungaphezulu kweminyaka eyi-12 uma bengazibekezeleli izakhi ezakha ukwakheka kwabo.
Le yinkimbinkimbi iyatholakala ngohlobo lwezibhebhe, ezihlanganiswe emabhulini ezingcezwana eziyi-10. Ibhokisi elilodwa lekhadibhodi liqukethe 6 amabhulashi.
Imaphi amavithamini aphathelene noshukela? Ngincoma ifa leDoppelherz. By the way, wonke umuntu angaba nakho! Ungathenga kanjani okushibhile
Isifo sikashukela sohlobo II siyisifo esikhohlisa kakhulu, esiyingozi hhayi kuso kuphela, kodwa ngenxa yezinkinga zaso. Imvamisa kuba yi-asymptomatic.
Ngaba nenhlanhla yokuthi "ngabamba" ekuqaleni kwalesi sifo. Lapho, uma usushintshe indlela odla ngayo, indlela ophila ngayo nesimo sakho sengqondo emzimbeni wakho, awukwazi ukwenza ngaphandle kwemithi ekhethekile kuphela, kepha, ngokungathandeki ngokwanele, kuthuthukisa impilo yakho!
Ngizochaza ngokudla okukhethekile kwe-carb okukodwa kokubuyekezwa okulandelayo, ngizokusho kuphela ukuthi kufanele kubhekwe ngokuqinile futhi njalo.
Futhi, ngakhoke, imingcele ekudleni izothinta inhlala-kahle kokubili ohlangothini oluhle nolungalungile.
Okungukuthi: ikakhulukazi ekuqaleni, isitho somzimba esijwayele “ushukela osheshayo” eminyakeni edlule, sidinga ngokuphuthumayo imikhiqizo / amalungiselelo anikeza “amandla akhulayo” (kodwa esivele singekho emiphumeleni emibi, njengaleyo “ishukela esheshayo” esichaziwe ngaphambili). Futhi, ukuntuleka okungapheli kwamavithamini nezinto zomkhondo ezibalulekile.
*Ushukela osheshayo noma i-carbohydrate ukumuncwa okusheshayo:
Ngokusekwehlukaniswa kwe "okusheshayo" kanye "noshukela omncane", kukholakala ukuthi "ama-carbohydrate alula" (izithelo, uju, ushukela oyisigaxa, ushukela owakhiwe ...), enamamolekyuli owodwa noma amabili, asheshe futhi amunze kalula.
Kwakucatshangwa ukuthi, ngaphandle kokudinga ukuguqulwa okuyinkimbinkimbi, ngokushesha baphenduka ushukela, bamunca odongeni lwesibeletho bangene egazini. Ngakho-ke, la mafutha e-carbohydrate athole igama elithi "ukumuncwa kwe-carbohydrate okusheshayo" noma "ushukela osheshayo."
Ukukhishwa: Izifundo ezenziwa ngamavithamini ziyadingeka, ikakhulukazi esikhathini sekwindla-nobusika.
Ngezikhathi ezithile ngangiphuza amavithamini ngaphambili, kepha kulokhu nginaka uhlobo olukhethekile I-Doppelherz asset Vitamin yeziguli ezinesifo sikashukela.
Amavithamini amaningi awanqwabelani emzimbeni, ngakho-ke, iziguli ezinesifo sikashukela zidinga ukunakwa okujwayelekile kwamalungiselelo aqukethe amavithamini kanye nama-macrolements ahlukahlukene. Ukudla inani elanele lamavithamini kusiza ukuqinisa umzimba, ukuthuthukisa isimo salo sokuzivikela komzimba, futhi kuvimbele ukuvela kwezinkinga. Iklanyelwe ngokukhethekile iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus, i-vitamini-mineral complex iqukethe amavithamini abalulekile ayi-10, kanye ne-zinc, chromium, selenium ne-magnesium.
Kuyinzuzo enkulu ukuthenga iphakethe lamathebhulethi angama-60. Amanani emakhemisi ahlukene kakhulu (kulokhu, inani lentengo lisuka kuma-ruble angama-300 kuye kwangama-600!).
Kade ngisebenzisa injini yokusesha yeLekVApteke isikhathi eside (inikeza ukutholakala kwezidakamizwa emakhemisi wezindawo eziboniswe nguwe ngentengo ekhuphukayo - elula kakhulu!), Ngibathenge ngama-ruble angaba ngu-350.
Amavithamini asezingeni, mkhulu impela.
Kunoma imuphi amavithamini, into esemqoka ukwakheka kwabo. Ngemuva kwebhokisi, ungayibona khona lapho.
Ukwanelisa ukushoda kwama-Vitamin emhlabeni jikelele, udinga ukukhetha izinto ezidingeka kakhulu kushukela. Inezakhi ezikhethiwe kucatshangelwa ukuphazamiseka kwe-metabolic okukhona ku-mellitus yesifo sikashukela. Yize amavithamini engenawo umthelela oqondile kushukela wegazi, athinta i-carbohydrate metabolism ngezindlela ezahlukahlukene eziqondile. Amavithamini amaningi kanye namaminerali adlala indima ebalulekile ezinqubweni zokuguqula ushukela.
Ngasohlangothini lwebhokisi uzobona imininingwane ephathelene nezinkomba / ama-contraindication, izimo zokugcina nokuphila eshalofini, njll.
Vitamin C: I-Perfectil - 30 mg, i-Doppelhertz - 200 mg.
Vitamin B6: I-Perfectil - 20 mg, i-Doppelhertz - 3 mg.
Magnesium: I-Perfectil - 50 mg, i-Doppelhertz - 200 mg.
ISelenium: I-Perfectil - i-100 mcg, i-Doppelhertz - 30 mg.
Impahla ye-Doppelherz ingihlaba umxhwele nge-200 mg ye-ascorbic acid ne-magnesium!
Vitamin C:Ihlanganyela kuzo zonke izinhlobo ze-metabolism, i-antioxidant yendawo yonke, ivikela izicubu kumonakalo ohambisana ne-hyperglycemia.
I-Magnesium: Iyingxenye yama-enzymes alawula i-carbohydrate, i-lipid, i-protein metabolism, elawula ukuvinjwa kwezicubu zezinzwa, ehlisa i-cholesterol, futhi ivimbele ukuhlanganiswa kwe-insulin.
Ezingeni lokuqonda kwendlu: i-ascorbic acid iqinisa amasosha omzimba, futhi i-magnesium inomphumela omuhle ohlelweni lwezinzwa!
Ithebhulethi zisemapheshana ezingcezu ezingama-20.
umsebenzi, ubungqabavu, ukunciphisa ukukhathala,
Izimpawu zokuqalwa kokutheleleka komoya okuphefumula kakhulu okudlulile ngaphandle komkhondo ngosuku.
Angiqaphelanga imiphumela emibi (kodwa ngizosho ukuthi angiguli nakancane futhi angikaze ngibe nomthelela omubi kusuka kwipheshana lesisu kuya kumavithamini).
Ngokulandelayo:inhlala-kahle, umsebenzi. Kulula ukulandela ukudla (ngenkathi ebandayo, uhlala ufuna ukudla, lapho uthatha amavithamini, uthokozile futhi unama-kilojoule amancane).
Lawa mavithamini awanawo umphumela oqondile kumazinga kashukela, kodwa afanelekile njengengxenye yezindlela zokuphakanyiswa kwezempilo ezibanzi.
Lawa mavithamini anconyelwa inkambo yenyanga eyi-1. Ngokwemvelo, ngemuva kwekhefu, kuzofanela ukuthi usiphindaphinde, ngoba ukuntuleka kwamavithamini kushukela kufanele kugcwaliswe njalo.
By indlela labo abangahlushwa yilesi sifo, lesi sidakamizwa naso singathathwa! Ngeke kulimaze isimo sethu esibandayo nemvelo ephansi.
I-Doppelherz asset Vitamin yeziguli ezinesifo sikashukela izoba wusizo hhayi ezigulini kuphela. Inhloso yawo iphinde ikhonjiswe kulabo bantu abanethuba eliphezulu lokuthola isifo sikashukela - abakhuluphele, abangakwazi ukubekezelela ushukela, labo abanesifo sikashukela phakathi kwezihlobo eziseduze.
Umphumela: Amavithamini we-Doppelherz asset kwiziguli ezinesifo sikashukela ngincoma kubo bobabili abanesifo sikashukela nabantu abanempilo ukuqinisa ukungatheleleki.
Kubalulekile ukuthola lesi sifo ekuqaleni kwesifo. Ingazibonakalisa kulezi zimpawu ezilandelayo:
ukozela, ukuvuka okunzima ekuseni, umuzwa oqhubekayo wokukhathala nobuthakathaka,
ukulahleka kwezinwele okusebenzayo. Izinwele ekhanda ziba buthakathaka, zithambe futhi zithambe. Ijazi elibi. Ekhomeni, kunokwanda okukhulu kokulahleka kwezinwele,
ukuvuselelwa kabusha. Ngisho isilonda esincane kunazo zonke singashiswa, siphilise kancane,
ukuluma kwezinye izingxenye zomzimba (izintende, izinyawo, isisu, i-perineum). Akunakwenzeka ukuyeka. Lolu phawu lubonwa cishe kuzo zonke iziguli.
Lesi yisifo esibi, okuthi ema-30% emacala aholele ekufeni. Ukuyinkimbinkimbi nangendlela yokusebenzisa izidakamizwa kunqunywe ngudokotela. Kwanele nje ukuthola ukubonisana nodokotela oqala ukuya khona.
Akukho ukusebenzisana okuthile okuphawuliwe.
IDoppelherz iyanconywa ukuthi ihlanganiswe nezidakamizwa ezinciphisa ushukela zohlobo 2 sikashukela.
Umuthi "Doppelherz" uthathwa njengomunye omuhle kakhulu, kepha emakhemisi ungathola ezinye izidakamizwa eziqukethe amavithamini namaminerali afanayo kubantu abanesifo sikashukela. Umuthi owodwa onjalo i-Alfabhethi. Umuthi uqukethe izingxenye ezengeziwe zamakhambi okwelapha, usiza ukwehlisa ushukela wegazi futhi uhlanze i-cholesterol eyeqile. Lokhu kungumkhiqizo wasekhaya.
I-German multivitamin complex "Diabetiker vitamine" isiza ukugcina amazinga ajwayelekile hhayi we-glucose kuphela, kepha futhi avikele ukukhula kwe-hypovitaminosis.Futhi kukhonjiswa ngokujwayelekile kokucindezela kanye ne-cholesterol, kuqedwe futhi kuvimbele ukwakheka kwama-plaque odongeni lwemithambo yegazi. Ithuluzi lingathathwa hhayi kuphela ngokusweleka kwamavithamini, kodwa futhi nokuvimbela i-pathology.
Contraindication okungenzeka nemiphumela emibi
Imvamisa, abanesifo sikashukela besaba ukuthi bangawasebenzisa nakanjani amavithamini anikezwe udokotela. Bakhathazeka ngokuthi, ngokubhekela ngemuva kokudla kwabo, lesi sifo asisibi. Kepha akekho obonile imiphumela emibi lapho ethatha iDoppelherz Asset.
Ukuvumelanisa ukusetshenziswa kwaleli thuluzi ukungabekezeleli kwalo. Lokhu kungabekezeleli kubonakala ngokwenzeka kokungezwani komzimba. Abalulekwa ukuthi ubanikeze abanesifo sikashukela abangaphansi kweminyaka eyi-12: lo muthi awukahlolwa ezinganeni.
Futhi, ukwamukela kwayo kufanele kushiywe ngesikhathi sokukhulelwa. Kwabesifazane abakhulelwe, kufanele kukhethwe amavithamini kucatshangelwa isikhundla sabo: kungcono ukuthemba i-gynecologist-endocrinologist, lo dokotela kufanele enze ukukhulelwa ezigulini ezinesifo sikashukela.
Ukuphendula okungalungile lapho uthatha ifa le-Doppelherz akwenzeki. Ngakho-ke, imiyalo ayiqukethe imininingwane ngabo.
Abantu abanesifo sikashukela.
Ukuphathwa ngomlomo. Musa ukuhlafuna izibhebhe. Thatha ithebhulethi eyi-1 isikhathi ngosuku. Uma kunzima ukugwinya ithebhulethi, ungayihlukanisa ibe yizingcezu eziningana bese uyithatha.
Ngaphakathi, ngenkathi kudliwa nokudla. 1 okuyinkimbinkimbi (amaphilisi ama-3 - ithebhulethi engu-1 yombala ngamunye kunoma yikuphi ukulandelana) ngosuku. Isikhathi sokwamukelwa siyinyanga eyi-1.
Ngaphambi kokusebenzisa, kunconywa ukubonana nodokotela.
Akunakusho ukuthi lokhu okungeziwe kokudla kufanele kuthathwe njengomuthi. Ngesikhathi sokuphatha kwayo, kuyadingeka ukuqhubeka nazo zonke izinqubo zezokwelapha ezibekiwe, ukulandela ukudla, ukuqapha ushukela, isisindo, nokuphila impilo esebenzayo.
Inhloso enkulu yaleli thuluzi ukugculisa umzimba wesiguli ngenani elifanele lezakhamzimba, ukumuncwa kwalo okunzima ngenxa yokuba khona kwalesi sifo.
I-Doppelherz Asset (amavithamini eziguli ezinesifo sikashukela) zenzelwe ngqo lesi sigaba seziguli. Zibhalwe kuphela esimweni sokushoda kwe-insulin ngokuphelele noma ukumelana kwezicubu zomzimba nemiphumela yako.
Amaphuzu amakhulu isenzo somuthi siqondiswe kuwo:
Ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga zesifo sikashukela i-mellitus (DM).
I-Naturalization ye-metabolism, evame ukuphazamiseka ngumthelela omubi we-hyperglycemia.
Ukuvuselela ukusweleka kwamavithamini abalulekile.
Ukusekela umzimba ekulweni nenkinga nokwandisa ukumelana kwayo nezinye izinto ezilimazayo.
Ukuthuthukiswa okujwayelekile esigulini.
Ngemuva kokusetshenziswa njalo kwalesi sidakamizwa ezigulini, kutholakala imiphumela elandelayo:
Ukunciphisa inani le-hemoglobin ye-glycated.
Ukwehla kancane kwesisindo somzimba.
I-Normalization yazo zonke izinqubo ze-metabolic.
Ukwanda kokumelana nomkhuhlane.
Kufanele kushiwo ngaso leso sikhathi ukuthi lesi sidakamizwa akufanele sisetshenziswe njenge-monotherapy yesifo sikashukela. Ayinayo impahla enamandla amakhulu we-hypoglycemic. Noma kunjalo, kunconywe yi-European Association of Endocrinologists njengengxenye yokwelashwa kwe-classical nokusetshenziswa kwemithi ye-insulin noma ushukela.
I-Doppelherz yabantu abanesifo sikashukela inqunywe emacaleni alandelayo:
Ukuqinisa amasosha omzimba
Ukuvimbela izinkinga zesifo sikashukela.
Ngaphambi kokusebenzisa izithasiselo zokudla, bonisana nodokotela.
Ama-Vitamin asset we-® ezigulini ezinesifo sikashukela 'alt =' Vesti.Ru: I-Doppelherz ® amafa Vitamini eziguli ezinesifo sikashukela '>
Indlela yokusebenzisa ngomlomo (ngomlomo). Ithebhulethi ligwinyiwe futhi lihlanzwa phansi nge-100 ml yamanzi angcolile ngaphandle kwegesi. Amaphilisi okuhlafuna awenqatshelwe. Umuthi uthathwa ngenkathi udla.
Umthamo wansuku zonke we-multivitamin tata yi-1 ithebhulethi kanye. Ithebhulethi ingahlukaniswa izingxenye ezimbili futhi ithathwe kabili ngosuku (ekuseni nakusihlwa). Inkambo yokwelapha ihlala inyanga eyi-1. Kuhlobo 2 sikashukela, i-Doppelherz ihlanganiswa nezidakamizwa ezinciphisa ushukela.
Uyini umyalo wokusetshenziswa kwesidakamizwa? Impahla ye-Doppelherz yamukelwa ukuze:
yehlisa ubungozi bezinkinga ngenxa yokungasebenzi kahle kwamanyikwe,
ngokuhambisana nokudla okuqinile, hlinzeka umzimba ngazo zonke izinto ezidingekayo zomkhondo,
ukunciphisa isikhathi sokululama kwezinye izifo,
gcina impilo yomzimba wonke.
Isengezo sokudla sikhiqizwa kuphela ngefomu lethebhulethi. Ithebhulethi zigcwele emabhulashini ama-10 ama-PC. lilinye. Kwiphakheji elilodwa elinemibala kunemiyalo futhi kusuka ku-3 kuya ku-6 amanxeba, anele ukuqeda yonke inkambo yokwelapha.
Amaphilisi we-Doppelherz wesifo sikashukela athathwa kanye ngesikhathi sokudla main, ahlanzwa ngamanzi. Ungahlukanisa ukunatha kwansuku zonke kube ekuseni nakusihlwa, uphuze uhhafu wethebhulethi. Isikhathi senkambo yokwelashwa siyinyanga eyi-1.
Kubalulekile! Ama-Vitamin Doppelherz Active awaphuzi uma uthwele ingane nalapho uncelisa ibele, ngoba izakhi ezisebenzayo zingathinta kabi ukukhula nenhlala-kahle yengane.
Yehlisa ubungozi bezinkinga njengomphumela womsebenzi we-pancreas we-pathological.
Shesha imetabolism ezigulini.
Susa ukuntuleka kwamaminerali, ukulandelela izinto ekudleni okhethekile.
Fushanisa isikhathi sokululama ngemuva kwesifo.
Gcina impilo yonke.
Umuthi uyatholakala ngesimo samaphilisi anegobolondo. Ebhokisini elilodwa lezingcezu ezingama-30.
Isicelo: Abadala nezingane ezineminyaka engaphezu kwe-12 banqunyelwe ukuthatha ithebhulethi eyi-1 isikhathi ngosuku.
Imiphumela emibi: ayitholakalanga.
Ukuxhumana nezidakamizwa: singasetshenziswa ngokuhambisana nanoma yiziphi izidakamizwa, ngaphandle kwezinkinga.
Contraindication: ukukhulelwa nokukhulelwa, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12.
Izimo zesitoreji: Gcina endaweni evikelwe ukukhanya kwelanga. Ukushisa kwesitoreji kungabi ngaphezu kwama-25 degrees Celsius. Khipha ukwamukelwa kwezingane.
Imibandela yokuthengisa: isatshalaliswa ngaphandle kadokotela, ihanjiswa kwinethiwekhi ekhethekile yamakhemisi.
Amavithamini wesifo sikashukela "Doppelherz" athatha ngokulandela imiyalo efakwe yonjiniyela kwiphakheji. Umenzi weluleka ukuthatha ithebhulethi eli-1 ngosuku ngokudla, ukugeza ngamanzi ahlanzekile ngenani elidingekayo.
Uma ithebhulethi inzima ukuyiginya, khona-ke ihlukaniswe yaba izingcezu ezincane futhi yathathwa yaba izingxenye. Ungahlukanisa ithebhulethi libe izingxenye 2 bese uyiphuza ngesikhathi sasekuseni nakusihlwa.
Isikhathi sokwelashwa esinconyiwe siyinyanga eyi-1. Uma kudingeka ukulungiswa komthamo ngamunye noma irejimeni yemithamo, kufanele uthintane nodokotela wakho.
Izibhebhe zigwinywa ngaphandle kokuhlafuna, bese zigezwa ngamanzi ahlanzekile namanje. Umuthi kumele uphuzwe nokudla.
Ithebhulethi elilodwa lanele ngosuku, kodwa ungalihlukanisa libe izingxenye ezimbili bese ulithatha ekuseni nakusihlwa.
Ukufeza umphumela wokwelapha, inkambo yezinsuku ezingama-30 iyadingeka. Uma isiguli sinesifo sikashukela sohlobo 2, kufanele sihlanganise ama-multivitamini nemithi yokwehlisa ushukela enconywe udokotela.
Ukwakheka kanye nesimo somuthi
Uhlu lwezakhi luqukethe amavithamini, okungukuthi i-E42 neziningi zesigaba B (B12, 2, 6, 1, 2). Ezinye izingxenye zokwakheka yi-biotin, folic ne-ascorbic acid, i-calcium pantothenate, i-nicotinamide, i-chromium, kanye ne-zinc nabanye abaningi.
I-Doppelherz iyatholakala ngesimo sethebulethi. Ezigulini ezinesifo sikashukela, iphakethe liqukethe izingcezu ezingama-30 noma ezingama-60. Ukusebenzisa okuyinkimbinkimbi kungathuthukisa umsebenzi womzimba, kukwenzela ukusweleka kwamavithamini, futhi kuthuthukise imetabolism futhi, ngenxa yalokho, inqubo yokuhlukanisa ushukela.
Musa ukusebenzisa ukusabela komzimba ezingxenyeni
Amavithamini eziguli ezinesifo sikashukela se-Doppelherz Asset
Akunconyelwe ukuthatha lesi sidakamizwa ngokungabekezelelani komuntu ngamunye, ngoba lokhu kungaholela ekwakhiweni kokungafani komzimba. Ngesikhathi sokukhulelwa nokubeletha, lesi sidakamizwa akufanele sisetshenziselwe ukwelashwa okusolekayo, ngoba lokhu kungayilimaza kabi impilo yengane.
Umuthi "Doppelherz" awunqunyelwe izingane zize zifinyelele eminyakeni eyi-12. Ukubonisana kwangaphambili nochwepheshe ngaphambi kokuthatha isengezo sokudla sesifo sikashukela kuyadingeka.
Amavithamini e-Doppelherz anohlu olufushane lwe-contraindication:
Hypersensitivity ezingxenyeni eziyinhloko noma ezisizayo
Iziguli ezingaphansi kweminyaka engu-12.
Ngaphambi kokusebenzisa izithasiselo zokudla, bonisana nodokotela we-endocrinologist.
Odokotela bakhumbuza ukuthi i-Doppelherz yeziguli ezinesifo sikashukela iyisengezo sokudla esingakwazi ukufaka esikhundleni semithi, kepha sigcwalisa umphumela wazo. Ukuze ungaguli, isiguli kufanele siphile impilo enempilo, sidle ngokufanele, senze izivivinyo zomzimba, silawule isisindo somzimba, siphuze imishanguzo ebekwe udokotela.
Akunconyelwe ukuthatha lesi sidakamizwa ngokungabekezelelani komuntu ngamunye, ngoba lokhu kungaholela ekwakhiweni kokungafani komzimba.
futhi ukunqunqa akufanele usebenzise lo muthi njengendlela yokwelapha esekelayo, ngoba lokhu kungayilimaza kabi impilo yengane.
Lesi sidakamizwa asisiwona umuthi, ngakho-ke, asikwazi ukusetshenziselwa ukwelashwa okuyisisekelo kwesifo sikashukela. Umuthi osekelayo yi-prophylactic futhi kuhloswe ngawo ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga kanye nokuqhubeka kwesifo ezigabeni zokuqala.
Ukungabekezelelani komuntu ngamunye ezingxenyeni zomkhiqizo. Ngaphambi kokusebenzisa, kunconyelwa ukubonana nodokotela.
Emiyalweni, uhlu lwe-contraindication ku-biop supplement Doppelherz Asset alufaki izinto eziningi:
izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12.
Emiphumeleni emibi ezigulini, ukusabela kokungezwani komzimba kwabonwa ngokungabekezelelani kwezithako ezisebenzayo zomuthi.
I- “Dopel hertz” iyisengezo sokudla esenzelwe ukunxephezela ukuntuleka kwezakhi ezilusizo kubantu abanesifo sikashukela. Ungayithatha kuphela ngemuva kokuqokwa kukadokotela, uma isiguli sine-hypovitaminosis engapheli kanye nokuntuleka kwezinye izinto ezidingekayo ezingasinxephezela ukusetshenziswa kwenkimbinkimbi.
Kukhona ukungqubuzana okuningi kakhulu kwamavithamini e-Doppelherz. Lokhu:
ukungabekezeleli ezingxenyeni eziyinhloko noma ezizisizayo,
iminyaka engaphansi kweminyaka eyi-12.
Izifundo ezenziwayo azange ziveze imiphumela emibi emzimbeni wesiguli.
Uma umthamo udlulwa kaningi, kungabakhona ukusabela komzimba. Uma ukulunywa, ukuqubuka, noma ezinye izimpawu zokungezwani komzimba kuvela, ama-multivitamini kufanele ayekwe.
Kumele kukhunjulwe ukuthi i-Doppelherz ayikwazi ukuthatha indawo yemithi ebekwe udokotela. Kungakhuphula umphumela wabo omuhle. Ukuze uzizwe kahle, isiguli kufanele sidle ngokufanele, sigcine isisindo ngaphansi kokulawula futhi siphile impilo enempilo.
Ukubuyekezwa kwesifo sikashukela
Kubukezwa nguMarina, oneminyaka engama-50. Eminyakeni embalwa edlule ngatholakala nesifo sikashukela.
Ngancika kuma-insulin. Ungaphila nalokhu, okubaluleke kakhulu, ukhethe kahle i-insulin.
Udokotela watusa ukuphuza amavithamini kaningi ngonyaka ukusekela umzimba. Into yokuqala ohlwini lwayo kwakungu-Doppelherz Asset.
Intengo yephakeji enkulu "yayiluma", ngakho ngathenga encane. Ngithande umphumela wamathebulethi ngemuva kokuwathatha amasonto amabili.
Nginqume ukuqhubeka nezifundo, ngathenga iphakethe elikhulu kakade. Imisipha, izinwele, isikhumba saqala ukubukeka kangcono, imizwa yathuthuka, kwaba nokuqina kwamandla ekuseni.
Ngicabanga ukuthi kwabanesifo sikashukela le nto enhle kakhulu.
Kubukezwa ngu-Ivan, oneminyaka engama-32. Bengihlushwa isifo sikashukela kusukela ngisemncane. Sonke isikhathi ku-insulin. Ngizama ukusekela umzimba ngama-multivitamini. Ngithole i-Doppelherz yokudla kokudla ekhemisi. Intengo ishibhile. Ngeke ngithi umphumela wangishaya njengento ethile. Impilo yeqiniso, nokho, umkhuhlane, njengabo bonke ozakwethu, awuzange ugule kulobu busika.
Ngaphezu kwezakhiwo eziboniswe ngaphambili, naka ukuvimbela ukwakheka kwezinkinga. Lokhu kufaka phakathi ukulimala emithanjeni yezinso (polyneuropathy), kanye ne-retina (retinopathy). Sicela wazi ukuthi:
lapho amavithamini avela ku-B angena emzimbeni womuntu, amandla okugcina amandla ayabuyiselwa, isilinganiso se-homocysteine ​​senziwe kahle,
lokhu kukuvumela ukuthi ulondoloze ukusebenza kohlelo lwenhliziyo,
I-folic acid ne-Vitamin E (tocopherol) inesibopho sokukhishwa kwama-radicals mahhala, akhiwa ngenani elikhulu emzimbeni wesiguli.
Lapho kugcwala lezi zinto, ezisetshenziselwa ukwakheka okujwayelekile naseMpahla ye-Doppelherz, inqubo yokubhujiswa kweseli iyavinjwa.
Into ebaluleke ngokulinganayo yi-chromium, eqinisekisa ukugcinwa kwesilinganiso seglucose efanele egazini. Kuvimbela ukwakheka kwe-pathologies yesicubu senhliziyo, kuqeda ukwakhiwa kwamafutha futhi kusize ukukhipha i-cholesterol egazini. Ukungena kwalo emzimbeni emzimbeni ngesilinganiso esanele ukuvimbela indawo yonke kwe-atherosclerosis.
I-Magnesium ibandakanyeka ezinqubweni ze-metabolic. Ngenxa yokugcwala, ziyakwazi ukuthuthukisa umfutho wegazi, futhi zivuse nokukhiqizwa kwama-enzyme.
Umthamo nemithetho yokusebenzisa
Lapho uqala ukwelashwa, kubalulekile ukuhambisana namazinga achazwe emiyalweni. Isilinganiso esifanele ngaphakathi kwamahora angama-24 yithebhulethi eyodwa. Kusetshenziswe nguDoppelherz ngesikhathi sokudla. Isikhathi senkambo yokutakula sithatha izinsuku ezingama-30. Uma kunesidingo, ukwelashwa okunjalo kungaphindwa ngemuva kwezinsuku ezingama-60.
Izithonjana ezingaba khona
Uma ufisa, onesifo sikashukela, esivumelana nodokotela oholayo, angathola amanye amavithamini. I-Endocrinologists ingayala nge-Alphabet Diabetes, Vitamin for Diabetesics (DiabetesikerVitamine), I-Complivit Diabetes, kanye ne-Glucose Modulators. Kukhona futhi amavithamini akhethekile abanesifo sikashukela ngokugxila kwe-ophthalmic "Doppelgerts OphthalmoDiabetoVit."
I-standard Doppel hertz Asset yelulekwa kuzo zonke iziguli.Abantu ababenezinkinga zesikhumba basabela kahle kuye.
I-GlucoseModulators iqukethe i-lipoic acid. Leli thuluzi liyanconywa kubantu abaphethwe ukukhuluphala. Lapho kuthathwa, ukukhiqizwa kwe-insulin kuyashukunyiswa.
Amacwecwe we-Alphabet Diabetes aqukethe izitshalo zezitshalo ezahlukahlukene ezinciphisa ushukela, nama-blueberries avikela amehlo.
"Amavithamini eziguli ezinesifo sikashukela" aqukethe i-beta-carotene, uvithamini E, ahluka emiphumeleni ye-antioxidant ebaluliwe. Ngokuvamile kunconywa kubantu abakade belwa nalesi sifo isikhathi esingaphezu konyaka.
Isenzo sokwelashwa kweDoppelgerz OphthalmoDiabetoVit sihlose ukuvikela izinkinga zamehlo ezivela kushukela oqhubekayo.
Ungathenga amavithamini kwabanesifo sikashukela cishe kunoma iyiphi ikhemisi.
"Impahla ye-Doppelherz yeziguli ezinesifo sikashukela" izobiza ama-ruble angama-402. (ipakethe lamathebulethi angama-60), ama-ruble angama-263. (Ama-30 ama-pcs.).
Isifo sikashukela seComplivit sibiza ama-ruble angama-233. (Amaphilisi angama-30).
I-Alphabet Diabetes - ama-ruble angama-273. (Amaphilisi angama-60).
"Amavithamini eziguli ezinesifo sikashukela" - ama-ruble angama-244. (Ama-30 ama-pcs.), Ama-609 rub. (90 ama-PC.).
"I-Doppelgerts OphthalmoDiabetoVit" - ama-ruble angama-376. (Amaphilisi angama-30).
Ngaphambi kokuthenga, abantu abaningi bafuna ukuzwa ukubuyekezwa mayelana ne-Doppelherz yamavithamini enesifo sikashukela kulabo asebathathe. Iningi liyavuma ukuthi uma usebenzisa leli thuluzi, ukukhathala nokudangala kuyadlula. Zonke iziguli zikhuluma ngokuqina kwamandla nokubukeka komzimba onamandla.
Okubi kufaka usayizi omkhulu wamatafula. Kepha le yinkinga engaxazululeki - zingahlukaniswa izingxenye eziningi ukuze kube lula ukugwinya. Amavithamini awathathi hlangothi ekunambithekeni, ngakho-ke azikho izinkinga kubantu abadala ngokusetshenziswa kwazo.
Iziguli ziphawula umphumela omuhle emavikini ambalwa ngemuva kokuqala kokuthatha lesi sidakamizwa.
Uma ukusetshenziswa kwamathebhulethi njengengxenye yenkambo yokutakula akunakwenzeka noma akwamukeleki, ukusetshenziswa kwama-analogues kuyacebiswa. I-Endocrinologists ikhomba amagama anjenge-Alphabet Diabetes, Vitamin for Diabetesics (DiabetesikerVitamine), iComplivit ne-Glucose Modulators (Glucose Modulators).
Izakhiwo eziyinkimbinkimbi ezine-eyeththalmological oriental nazo zakhiwe - yi-Doppelgerz OphthalmoDiabetoVit.
Kunconywa ukuyigcina ezindaweni ezingafinyeleleki ezinganeni, naselangeni elisebenzayo. Ukungabikho komswakama ophezulu kuyafiseleka; izinkomba zokushisa akufanele zifinyelele ku-35 degrees. Impilo yeshelf iyizinyanga ezingama-36, ngemuva kokuphothulwa lapho kungafanele ukusetshenziswa kwengxenye yamavithamini, kunikezwe amandla aphezulu ezinkinga ezinzima.